updated:Sep. 25, 2020
Barron's AP Biology Course Information
Barron ee Biology AP buugga waa hage u eegis loogu talagalay ardayda diyaarinaya imtixaanka Biology AP a. Si kastaba ha ahaatee, Hagaha dib u eegista waa wax an udiyaarin wanaagsan qaybta Biology of DAT ah. Waxa ay la mid tahay CliffsNotes AP Biology iyo waxa aan loogu tala galay in lagu badalo il Biology more dhamaystiran sida buugga la mid ah Campbell Biology. Waxaa la aruurshey iyo Ogolow in si aad akhriska iyo wax ka barato waxa aad u baahan tahay in la ogaado oo kaliya.
Kanu waa buuggii u eegis loogu talagalay Baarista Biology AP a, Sidaa darteed dhamaan macluumaadka ku dhex jira ma aha khusayso in DAT ah. Waxaa si caddaalad ah oo faahfaahsan hagaha dib u eegis, laakiin weli ma aha sida dhamaystiran sida buugaagta si ma filan si aad u ogaato wax kasta oo ku saabsan Biology pages ay gudahood. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay qalabka dheeraadka ah maadooyin gaar ah, laakiin tilmaan u eegista ma daboolo dhammaan mawduucyada loo baahan yahay in Biology for DAT ah.
Halkan waxaa ku qoran warbixin guud ee hage u eegista:
Barron ee Muhiimka ah 5
Review Area Subject
SALDHIGGA kelli ee Dhaxalka
Immune System Human The
Animal Dhalmada iyo Horumarinta
Shan Dulucda kaa caawinaya in aad ku qor Qormo a Great
ilaa Fasalka Baro Sidee Qormo ah
Lifaaqa B–Qiyaasaha loo adeegsaday in Biology
Lifaaqa C–Shaxan tixraaca
hage ku tiirsan tafsiir waxa ku jira laba imtixaan iyo sidoo kale fursad u iibsato a CD-ROM ee dheeraad ah laba imtixaan dheeraad ah oo computer ku salaysan. The CD-ROM ka mid ah goolasha automatic baaritaanka fulinteeda iyo buugga labadaba iyo CD-ROM ku jira sharaxaadda jawaab su'aal kasta. Waxay sidoo kale bixiyaan baaritaanka dheeraad ah bonus dhaqanka online for iibsiga buug oo keliya ama la CD-ROM. Haddii aad sidoo kale ka iibsan ee CD-ROM markaas waxaad yeelan doontaa guud ahaan 5 imtixaan. Waxaa sidoo kale jira xulashada badan oo xor ah jawaab dhaqanka su'aalo dheeraad ah la sharaxaadda jawaab buugga oo dhan dhamaadka cutub kasta.
Barron ee Biology AP waa hage u eegis weyn inay kaa caawiyaan inaad u diyaar garoobaan qaybta Biology of DAT ah. Waa cheap, la awoodi karo, laakiin sidoo kale si fiican u qoran si aan u soo jeedin lahaa sidii wax a in la isticmaalo waxbarashada Biology. Waxaa jira qaladaad dhowr oo ay ku jirto qalad naxwaha iyo wargelin ah oo u muuqataa in ay arrimuhu caadi ah in buugaag dib u eegis dhan Barron ee, laakiin ma aha in ku dhawaad ​​sida baadi-ciiraya sida Barron ee DAT dib u eegis guide.
Waxaa jira waxoogaa ilaa xad ah ee wax ku saabsan Biology hagaha dib u eegis. Waxaa ku jira content more, sawirada, iyo ku dhaqmaan su'aalo badan CliffsNotes AP Biology. Waxaa ka hawl yar in ay akhriyaan iyo ka badan CliffsNotes sidoo baran. Waxa ay u muuqataa sida buug carruurta leh sawirada oo dhan, halka CliffsNotes badan yahay sida encyclopedia ah in kaliya uu dhigayaa xaqiiqooyinka. sharaxaad jawaab Qaar ka mid yihiin wax yar caddayn iyo waxaa laga yaabaa in ay adag tahay in la fahmo sababta jawaab sax yahay, Sidaa darteed, il dib u eegis dheeraad ah ayaa laga yaabaa inuu waxtar leh si ay u sharxaan dheeraad ah marka Barron ee ma aha.
The xoojinka Barron ee ah in ardayda ugu heli waxtar u DAT ah waa in ay fududahay in la akhriyo waa, dheeraad ah oo qoto-dheer, oo uu leeyahay wax dib u eegid wanaagsan on Geedaha iyo Taxonomy badan CliffsNotes. Ardayda intooda badan waxay door bidaan CliffsNotes badan Barron ee haddii aad qabto in ay qaado dhexeeya labada, laakiin waxaan soo jeedin lahaa labadoodaba la isticmaalayo wada. Waxaan baran lahaa ka CliffsNotes inta badan, laakiin sidoo kale samayn lahaa dhammaan imtixaan ee tijaabada ah iyo su'aalaha ku Barron ayaa sidoo kale ku teedsan jidka iyo waxbarasho ka Barron ayaa marka aad u baahan tahay eegno wax kale oo qoto dheer.
Sidoo kale, waa in aad isticmaasho Barron ee ku Geedaha iyo qaybaha Taxonomy halkii CliffsNotes sida qaybaha kuwan waxaa si fiican u sharxay in Barron ee. Sidaas kaa buuxin doonaa oo dhan dhimman macluumaadka aad u baahan tahay in la ogaado, waayo, qaybta Biology DAT. Waxay labaduba dib u eegis la awoodi karo hanuunin si aad u iibsato oo labadaba midba midka kale in ay ku filan si aad u diyaariso imtixaanka la dhamaystiro.
Haddii aad qabtid soo jeeda Biology daciif markaas laga yaabaa in aad rabto in aad ka fiirsan iibsiga il dib u eegis dheeraad ah oo dhammaystiran sida Campbell Biology in la isticmaalo marka laga soo tago in ay dib u eegis ku Hanuuniyaa AP. Sidaas marka aad la kulantid wax oo aadan innaba garan karaa dib u eegida oo keliya ku hanuunin waxaad yeelan doontaa il dheeraad ah oo dhamaystiran si loo eego in ay waxgarashada.
qalab kale oo waxbarasho si ay u isticmaalaan in lala guide dib u eegis Biology AP ee Barron ee waa Biology AP Barron ee Flash Cards. Waxay yihiin gargaar weyn waxbarasho marka loo isticmaalo tusmo guide eegista AP iyo waxay yihiin sida awoodi. Waxay aad u faahfaahsan oo kaararka flash iyo aad u Ogolow in ay hal dhibic ka jira. Kaararka flash u iman set oo ah 500 kaararka daboolaya 20 qaybo guud:
Xididdada & murqaha
Dhalmada & Horumarin
Kaararka flash The kaatunka a soocidda lifaaqan u yimid inuu u fududeeyo si ay u fuliyaan iyo baran-on-ka-tago. Sidoo kale waa u fududahay in ay iyaga abaabulo si ay u daboolaan baahida waxbarasho.
Biology AP Barron ee Information Course
1. Waxyaabaha aad u fiican, waayo, DAT Biology Prep
3. cheap & La awoodi karo
4. Easy Read Si & Study